သူကြီးမင်း (တုံးဖလား): ကမ္ဘာကျော်ဒိုင်းဆု ရွေးချယ်ခြင်း
စကာတင်ပါတယ်ဆိုတော့ မုန့်ကျွေးသင့်တယ်။ (ဆိုင်တော့မဆိုင်ဘူးလားမသိ)။
Friday, 12 August 2011 at 15:32:00 BST
ဂလိုရှိတယ် တဂျီးရဲ့ ခင်မင်နောက်ပြောင်လိုစိတ်နဲ့ တဂျီး
ဖြစ်နေသလားလို အားနာလို့ သူကြီးလို့ပြန်သုံးလိုက်
တာရယ်...၊ဆိုတော့ ခင်လို့မင်လို့ တဂျီးလို့ပဲနောက်ကိုသုံး
Friday, 12 August 2011 at 15:40:00 BST
၀ါးးးးးး တဂျီးမင်း ကျေးဇူး တင်ပါတင်ခင်ညာ...( ၀မ်းသာပီတိဖြင့် ဆို့နင့်သံလေးနှင့်)
ကမ္ဘာကျော်ဒိုင်းဆု ရွှေးချယ်ခြင်းမြင်လို့ လာဖတ်တယ်။ ဒိုင်လူကြီး သုံးယောက်ကို မြင်ပြီး စဉ်းစားရ ကြပ်သွားတယ်။ အပေါ်က ကင့်မွန်နဲ့ စောက်ဘီ နဲ့ ပြန်တွဲတယ်. ဘဘောမပေါက်သေးဘူး။ ငယ်ရွယ် တက်ကြွ စန်းပွင့်နဲ့တွေ့တော့ ရှုပ်သွားတယ်။ ဒိုင်းဆု ရဲ့ ထောက်တိုင်တွေ အောက်က မိုးယံ ကိုမြင်တော့ လန့်သွားတယ်.. အောက်မှာလဲ ကွန်မန့်တွေဆိုတော့ ဘာကြီးမှန်းမသိသေးဘူး။ (ဟိုတစ်ခါက တန်ပြန်ကွန်မန့်ကျ ချက်ခြင်းနားလည်သား)
ဒါနဲ့ ကွန်မန့်အောက်က သူဂျီးမြင်းရေးတာကို မြင့်တော့ ရှင်းသွားတယ်.. ဇကာတင် ခြောက်ယောက်မှာ အောက်ဆုံးကနံပါတ်ဆိုတော့.. အပေါ်က ပုံတွေပြန်ကြည့် ဘယ်သူ့နံမည်တွေ ကျန်သေးလဲလို့။နောက်တော့ မှ....
Friday, 12 August 2011 at 16:18:00 BST
ကိုကိုမောင်ရဲ့ ကမ္ဘာကျော်ဒိုင်းဆုရွေးချယ်ပွဲကို လာရောက်ရင်း ရွေးချယ်ခံရသူ ၆-ဦးကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ အန်တီတင့်ရဲ့ 'ငှက်ပျောပေါင်းချိုစိမ့်မွှေး' ကို ဒိုင်လူကြီးသုံးမွှာပူးအပါအဝင် စာဖတ်ပရိတ်သတ်များနဲ့အတူ လာရောက်သုံးဆောင်ကြပါလို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်နော်း))
Friday, 12 August 2011 at 17:26:00 BST
Friday, 12 August 2011 at 18:31:00 BST
သူကြီးသာ 3ထိပ် ကို 5နောက်ပိတ်...
သူကြီးကို ချဲလင့်စ် မလုပ်နိုင်သေးတာ..
Friday, 12 August 2011 at 18:33:00 BST
ဟိဟိ အသက်၄၅လို့ ပြောလို့ စကာတင်ထဲ မပါတာနေမယ် ...:):) အဟီးးးးးးး ပြောမှပေါ့လို့ အကိုရ...:P:P
Friday, 12 August 2011 at 18:47:00 BST
၅ ထိပ် ၇ ပိတ်ပါဗျာ . .ဟီး
Friday, 12 August 2011 at 18:49:00 BST
ဒီလိုမှန်းသိ ပေါက်စန ပူတူးတူးလေးလို့ ပြောသွားပါတယ် သူဂျီးရယ်
ဒါမှ သူဂျီးချီးမြင့်တဲ့ ဆုရမှာ
ဒါနဲ့ အကောင်းဆုံးပိုင်ရှင်ကို ဒေါ်လာတစ်သိန်းဆုချမယ်ဆို
မိုးယံတော့ ပွပြီပေါ့နော် သူဂျီးး)
အလိုလေး...မွေးနေ့ဆုတောင်းကိုတောင် ဇကာတင်တွေ၊ ဆန်ကောတင်တွေလုပ်ပြီး ဆုချီးမြှင့်ရတယ်လို့...ထူးဆန်းပါပေ့ သူကြီးရယ်...ဦးဟန်ကြည်အကောင်းစားကလေးကို တစ်ဦးတည်းသော မဒီကို ကြောက်ရတယ်လို့ အထင်တော်လွဲရက်တာတော့ ရက်စက်ပါပေ့...ဒါကြောင့်လဲ သူကြီးမင်း မစွံပေတာကိုး...အဲဒါ ကြောက်တာမဟုတ်ဘူး သူကြီးရေ...ချစ်တာလို့ ခေါ်သဗျ...အနှီဟာကို အချစ်လို့ မသတ်မှတ်နိုင်သေးသမျှ တွံ...သူကြီူးမအင်း ကိုက်ိုမောင်သည်...ဧကော၊ ဧက...တစ်ကိုယ်တည်း လူပြိုကြီးဖြစ်၍သာလျှင် နေစေသတည်းဗျား....
Friday, 12 August 2011 at 21:24:00 BST
သူများ“၁” ရပြီးမှ ဆုနဲ့ကပ်လွဲသွားတယ်...
Friday, 12 August 2011 at 23:32:00 BST
ကမ္ဘာကျော်ဒိုင်းဆု ရွှေးချယ်ခြင်းမြင်လို့ လာဖတ်တယ်။ ဒိုင်လူကြီး သုံးယောက်ကို မြင်ပြီး စဉ်းစားရ ကြပ်သွားတယ်။
Saturday, 13 August 2011 at 13:29:00 BST
အခုမှ ၁၆ နှစ် ပြည့်ဖို့တောင် တစ်ရက်ရော့ နေသေးတယ်
သူကြီးရယ် ပေးမိတာက သတိ ပါ.......
အရီး မရှိတဲ့သူတွေဆိုရင် မျက်နှာသာ မပေးကြဘူး}}}း
Saturday, 13 August 2011 at 14:02:00 BST
ဟတ်ပီးဘတ်ဒေး သူကြီးမင်း။ မွေးနေ့ မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ။ အမြန်ဆုံး အစွံထုတ်နိုင်ပါစေး)။ ကွန်မန့် တွေ ဖတ်ပြီး ရယ်လိုက်ရတာ။ ဗိုက်တောင် အောင့်တယ်းD
Sunday, 14 August 2011 at 02:28:00 BST
ဘာပြောပြောလေ သယ်ဂျီးချီးမြင့်တဲ့ဒိုင်းကြီးကိုဘလော့ဂါရွာသားတစ်ယောက်ဆွတ်ခူးသွားလို့ကျေနပ်ပါတယ်း)း)
Monday, 15 August 2011 at 08:47:00 BST